अझ तिन दिन बर्षा हुने ! - PUBLICAAWAJ
अझ तिन दिन बर्षा हुने !
प्रकाशित : बिहिबार, चैत २१, २०७५१५:४० पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, आजबाट अझ ३ दिन बर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार गए रातिदेखि पूर्वमा कमजोर रुपमा बनेको न्यून चापीय रेखा र बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा तथा स्थानीय वायुको प्रभावले बदलीसँगै आगामी तीन दिनसम्म देशभरि नै बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
महाशाखाका मौसमविद् मञ्जु बासीका अनुसार वायुको यस्ती प्रभावले मौसम बदलीसँगै हल्कादेखि मध्यम वर्षा गराउनेछ । काठमाडौँ उपत्यकामा दिउँसो केहि बेर खुल्ला भए घाम लाग्ने भएता पनि अन्य स्थानमा भने तत्काल मौसम सफा हुने अवस्था नरहेको बासीले बताएकी छिन् ।
देशको पूर्वी र मध्य भूभागमा राती आंशिक बदली रही पश्चिमी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी छ । महाशाखाका अनुसार शुक्रबार देशका मध्य भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पश्चिमी क्षेत्रका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्र्षाको सम्भावना रहेको छ ।
त्यसैगरी, शनिबार देशका अधिकांश भू–भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ । महाशाखाका अनुसार उच्च हिमाली भूभागहरुका केही स्थानमा मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
पत्रकार शुशिललाई ज्यान मार्ने धम्की, यी हुन् धम्की दिने व्यक्ति !